Primary School (Grade1-Grade5)
Secondary School (Grade6- Grade 8)
High School (Grade 9- Grade 12)
Group 2: Second Lauguage
Group 5: Maths and computer science
Programme Assessment Philosophy
IB Diploma at HIS
Admission to HIS
Student Info Confidentiality
What is Hi-SMO
Mathemania | HORIZON (An IB World School)	Mathemania Mathemania 2012 Results
Top 20 Students (High School Category-Yangon)
Top 20 Students (Secondary School Category-Yangon)
Top 20 Students (Primary School Category-Yangon)
HIGH SCHOOL CATEGORY - (Yangon)
SECONDARY SCHOOL CATEGORY - (Yangon)
PRIMARY SCHOOL CATEGORY - (Yangon)
What is Mathemania ?
Mathemania 2012 Poster
Mathemania is an annual contest consisting of different kinds of puzzles for different levels organized by Horizon Int'l School (HIS) Math Department in Yangon, Mandalay, Taunggyi and Lashio. The purpose of this contest is to boost enthusiasm towards Math and strengthen the critical thinking skills of students.
Any student from Primary, Secondary, or High school level can participate in this contest. Levels are as follows:
June 1, 2001 – May 31, 2004
June 1, 1998 – May 31, 2001
June 1, 1995 – May 31, 1998
The Contest consists of 20 puzzles. A basic knowledge of math skills, like addition, subtraction, division and multiplication is required.
Primary, Secondary, High School levels participants take different level according to their age. The questions are both in English and Myanmar.
The contest will be held on 01st and 02nd of December 2012; for all the participants of different levels. Time and Venue of the Contest will be mentioned in the participants' Identity Card.
The contest will start at 9:00 (a.m.) sharp. Participants of each Level are suggested to come at least 45 minutes before the Contest starts.
Mathemania 2012 Results
High School Category Top 20 Students
(NOT IN ORDER, WINNERS WILL BE ANNOUNCED ON THE AWARD CEREMONY DAY)
Kyi Zar Thin@Florence
Tyson @ Htet Naing
Maha Mya Kyun Tha
BEHS - 2,Insein
BEHS - 4, Ahlone
Aung Kyaw Thwin@Steven
Min Htet Shein
BEHS - 1,Lanmadaw
BEHS - 2,Bahan
Nay Ye Oo
BEHS - 2,Kamayut
Yan Naing Hein
Thant Kyaw Hein
BEHS - 3,Dagon
BEHS2THARKAYTA
YE MYAT HTUT
Han Ni Phone Naing
BEHS (3) Botataung
Secondary School Category Top 20 Students
BEHS - 1,Dagon
BEHS - 1,North Okkalapa
Wai Naing Htun
Su Wint Thaw
BEHS - 2,Latha
BEHS (1) Latha
PAING HTOO KYAW
BEHS (2) Botataung
Su Myat Thiri
BEHS (2) Insein
Htet Myat Htun
Nyi Min Thant@Michael
Alexander kyaw kyaw oo
Kaung Khant @ K.K
Su Yi Tar
BEHS - 2,Hlaing
BEHS - 2,Sangyaung
BEMS - 1,Dagon
Mudar Aung Than
Hein Myat Tun
Primary School Category Top 20 Students
Thiha Kaung Sett
Su Lei Lei Naing
BEHS -2, Sangchaung
BEPS -2, Bahan
Swam Yee Paing
Kyaw Htet Lynn
No.2 B.E.H.S Kamayut
Yoon Su Lin
Aye Thura Phyo
Su Yamin Myat
Anthony Linn Zheng Hui
Nay Win Thu
HLA YAMIN PHYO
Si Thu Moe
Pyae Sone Min Naing
BEHS (4) Pazundaung
Zay Ye` Htut
BEHS - 1 ,Latha
Kaung Myat Win BEHS - 1 ,Latha
Thin Thant Thant Thaw
Ye` Myat Naing
BEHS - 2,Dagon
Kaung Khant Paing
Mya Thet Chel
May Inginn Khaing
Poe Pa Pa Htun
Tun Nandar Aung
Haymann Hnin Pwint
Zin Lin Lin Htet
Min Thike Nyan
Zar Pwint Tun
Shine Thiha Oo
Nay Zaw Win
Saw Yan Naing Tin Thein
Myat Theint Theint Htet
Lin Thada Htun
Pau Tun Khup
Min Nyi Shein
BEHS - 4,Mingalar Taung Nyunt
Zaw Ye` Htet BEHS - 4,Mingalar Taung Nyunt
Phyo Nyan Thit
Soe Zarni Tun @Billy
Hein Min Phyo
Hlaing Myo Htet
Hlaing Myo Htun
Tha Toe Khant Htel
Swam Htet Ko
Wai yan Win Htet
Hnin Aye Wi
Myat Ei Mon Soe
Thaw Tar Phyo
Paing Thant Ko Ko
Ye` Lwin Moe
BEHS - 2,Lanmadaw
Than Htike Zaw
BEHS - 6,Ahlone
Thaw Htet Oo
Po Po Myint Thu
Seng Htoi San
May Thu Tun
Zwe Nyi Htut
BEHS - 3,Sanchaung
Tun Min Lwin
Zaw Myint Oo@Jack
Myo Kyaw Tun
Aung Set Paing
Aung Myo Lwin BEHS - 2,Kamayut
Myo Nandar Kyaw
Kyi Phyu Lin Aung
BEHS - 5,Botahtaung
Kaung Myat Naing@CK
Wun Dan Naw Lat
Dharma Darren Ram
Swe Wai Ne Htet
Hein Thiha Aung
Myint Mo Aung
Zin Hmoo Pan
Akar Ko Ko
Hsu Myat Hninn Htet
Phyo Hlaing win
Htin Thar Win
Pyae Phone Myint
Aung Hsu Naing
Ye Linn Hein
Thaw Min Htet
Thamee Oo Thet
Lin Khant Paing
Hnin Yadanar Htay
Pyi Thein Khine
Hnin Aung Htet
Peter Myo Min
Pyae Sone Sett
BEHS (2) Bahan
Hnin Wutyee Shwe
Phyu Hnin Khin
Nyan Phyo Htet
HAIN HTIKE AUNG
MOE BARANI HLA WIN
PHYO THU KHAING
BEHS4THARKAYTA
POE HNIN PHYU
BEHS 1 TARMWE
ZAW NYI NYI LWIN
PHUE PHUE THAZIN
THAW ZIN HTUN WIN
Su Thin Zar Nwe
BEHS (1) Botataung
BEHS (2) Tharkayta
Zwe Htet (2)
San Dar Htun
Myat Sandi Tint
Min Oo Thant
BEHS (1) Tharketa
Khaing Thu Thu
HIS - SKT
SECONDARY SCHOOL CATEGORY - (Yangon) Download the results	PRIMARY SCHOOL CATEGORY - (Yangon)
PRIMARY SCHOOL CATEGORY - (Yangon) Download the results	What is Mathemania ?
The prize awarding ceremony will be held2weeks after the contest (22th of December 2012 for Yangon. Dates and venues will be announced later for other cities).
There will be5grand prize winners for each level as given in the table below and the top 20 scorers will receive special prizes.
High Schoool Level
Contestants should solve at least 60 % (12 questions) to be eligible for the Grand Prize. Ifacontestant solves less than 60% of the questions he/she will be ranked according to the score earned.
Prizes will be awarded during the Award Ceremony in December 2012.
HIS Math Department holds the right to disqualify any contestant who violates the above mentioned rules and conditions or any ethical rules during the exam.
To overcome the traffic problem, parking vehicles inside the campus or near to school is not allowed.
All participants are requested to read and accept the above rules and regulations before entering into the contest.
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် သချာင်္ဉာဏ်စမ်းပြိုင်ပွဲကြီး၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၁)Horizon ကျောင်း၏သချာင်္ဌာနမှ ကြီးမှူး၍ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ တောင်ကြီး နှင့် လားရှိုးမြို့ တို့တွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော သချာင်္ဉာဏ်စမ်းပြိုင်ပွဲသည် မတူညီသောအဆင့်များအတွက် မတူညီသော ဉာဏ်စမ်း ပုစ္ဆာများပါဝင်သော ပြိုင်ပွဲကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ ဆန်းစစ် ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သော စွမ်းရည်တိုးတက်လာစေရန်နှင့် သချာင်္ဘာသာရပ်အားစိတ်အားထက်သန်မှု မြင့်တက်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဤပြိုင်ပွဲအားကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၂) မည်သူများ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသနည်း ?
အခြေခံပညာ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းအဆင့်များမှ မည်သူမဆို ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင် ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲအဆင့်များ ခွဲခြားမှုမီမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၁ ရက် ဇွန်လ ၂၀၀၁ ခုနှစ် - ၃၁ ရက် မေလ ၂၀၀၄ ခုနှစ်
၁ ရက် ဇွန်လ ၁၉၉၈ ခုနှစ် - ၃၁ ရက် မေလ ၂၀၀၁ ခုနှစ်
၁ ရက် ဇွန်လ ၁၉၉၅ ခုနှစ် - ၃၁ ရက် မေလ ၁၉၉၈ ခုနှစ်
၃) ပြိုင်ပွဲအဆင့်တစ်ခုစီတွင် ဉာဏ်စမ်းပုစ္ဆာ (၂၀) စီပါဝင်ပါသည်။ သချာင်္ဘာသာရပ်၏ အပေါင်း၊ အနှုတ်၊ အမြှောက်၊ အစား ကိုအခြေခံသော သချာင်္စွမ်းရည်နှင့် ဗဟုသုတ များကိုလေ့လာသိရှိထားရန် လိုအပ် ပါသည်။ ၄) အခြေခံပညာ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းအဆင့် ပြိုင်ပွဲဝင်များအနေနှင့် မိမိတို့၏ အသက်အရွယ်အလိုက် ခွဲခြားထားသောပြိုင်ပွဲအဆင့်များတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်း များကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြန်မာဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း ဖော်ပြပေးထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၅) သင်္ချာဉာဏ်စမ်းပြိုင်ပွဲများအား ၁ ရက် နှင့် ၂ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၂ တွင်ကျင်းပ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့် အချိန်နှင့်နေရာအား ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ ID ကဒ်တွင် ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၆) ပြိုင်ပွဲအား ယင်းနေ့၏ မနက် (၉း၃၀) တိတိတွင်စတင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်များ အားလုံးသည် ပြိုင်ပွဲမစတင်မီ ၄၅ မိနစ်ကြိုစော၍ ရောက်ရှိနေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
လျှောက်လွှာတင်ရမည့် ပုံစံအစီအစဉ် ၇) ပြိုင်ပွဲဝင်လျှောက်လွှာတင်သူများအနေနှင့် လွန်ခဲ့သောသုံးလအတွင်းက ရိုက်ကူးထားသော ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ နှင့်တကွ ပုံစံဖြည့်၍ ၂၈ ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၂ ညနေ (၄း၀၀) နောက်ဆုံးထားပြီး ပြန်လည်ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါ သည်။ လျှောက်လွှာပုံစံများအား Horizon ကျောင်းရုံးခန်းနှင့် www.horizonmyanmar.com တွင် download ယူနိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာပုံစံများအား မိတ္တူကူးယူ၍လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၈) ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ မွေးသက္ကရာဇ်အမှန်ကိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက် လျှောက်လွှာတင်သည့်အချိန်တွင် မိမိ၏ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ ကျောင်းသားကဒ် (သို့) အခြားသက်သေခံကဒ် တစ်ခုခုအား ယူဆောင်ပြသရမည် ဖြစ်ပါ သည်။
၉) ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် လျှောက်လွှာကြေးအတွက် (၁၀၀၀) ကျပ်ပေးဆောင်ရပါမည်။
၁၀) ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် သချာင်္ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းဟောင်းများ ပါဝင်သော နမူနာမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာအုပ် ကို ၀ယ်ယူလေ့ကျင့်လိုပါက တစ်အုပ်လျှင် ၁၅၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် Horizon ရုံးခန်းမှ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
၁၁) ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ ID ကဒ်များအား နိုဝင်ဘာ ၂၆ မှ နိုဝင်ဘာ၂၉ ရက်အတွင်းထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲ နေ့၌ ယင်း ID ကဒ်ပြသနိုင်မှသာလျှင် စာမေးပွဲအား ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်များသည်မိမိ၏ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်နှင့် သချာင်္ဉာဏ်စမ်း ID ကဒ်အား စာမေးပွဲနေ့တွင် အတူ ယူဆောင်လာရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၂) ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် မိမိတို့၏ ID ကဒ်ပါ ခုံနံပါတ်အတိုင်းနေရာယူရပါမည်။
၁၃) ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် စာမေးပွဲခန်းအတွင်းသို့ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဂဏန်းတွက်စက် များ၊ ကွန်ပျူတာများ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းများ၊ I-Phone အစရှိသည့် အခြား အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းများအား ယူဆောင် လာခွင့် မရှိပါ။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား စာရေးကိရိယာ တန်ဆာပလာ နှင့် ခဲဖျက်၊ဖျက်ဆေးမျှသာ ယူဆောင်ရန်ယူဆောင်ရန် ခွင့်ပြုထားပါသည်။
၁၄) ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် စာမေးပွဲခန်းအတွင်း လျှောက်သွားခြင်း၊ အခြားသူများနှင့် စကားပြောခြင်း၊ စာရေး ကိရိယာတန်ဆာပလာများအား ငှားရမ်းခြင်း၊ မျှဝေသုံးစွဲခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။
၁၅) အကယ်၍ မိမိရရှိထားသော မေးခွန်းစာရွက်တွင်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမှားအယွင်းတစ်စုံတစ်ရာ တွေ့ရှိခဲ့ပါက မေးခွန်းစာရွက်အသစ်ကိုတောင်းယူခွင့်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် ဉာဏ်စမ်းပုစ္ဆာ များစတင်မဖြေဆိုမီ မေးခွန်းစာရွက်အားအသေအချာ ဖတ်ရှုရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့မှသာ စာမေးပွဲခန်းစောင့်ဆရာ မှ မေးခွန်းစာရွက်အသစ်အချိန်မီ လဲလှယ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၆) ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် မေးခွန်းပိုင်းဆိုင်ရာ မရှင်းလင်းသည်များရှိပါက စာမေးပွဲခန်းစောင့် ဆရာအား မိမိလက်ကိုမြှောက်၍ အသိပေးမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် မိမိကြောင့် အခြားသူများနှင့် စာမေးပွဲခန်း အားဆူညံစေခြင်းဖြင့် အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရပါ။
၁၇) ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးစီးသည်ဖြစ်စေ၊ မပြီးစီးမီဖြစ်စေ ဆရာမှ အဖြေလွှာများ အားလုံး သိမ်းဆည်းပြီးသည် အထိ မိမိ၏ခုံနေရာတွင် ထိုင်နေရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် မိမိ၏မေးခွန်းစာရွက် အား အိမ်သို့ယူဆောင်သွားခွင့်ရှိပါသည်။
၁၈) ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းတစ်ခုစီ၏ အဖြေမှန်ကန်ခဲ့ပါက မေးခွန်းဘေးတွင်ဖော်ပြပေးထားသော အမှတ် အတိုင်းရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ပုံဆွဲခြင်းနှင့် ဉာဏ်စမ်းပုစ္ဆာအများဆုံး မှန်ကန်စွာ ဖြေဆိုနိုင်ခြင်း ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၉) အကယ်၍ အဆင့်တစ်ခုတွင် ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် မေးခွန်းအားလုံးဖြေဆိုနိုင်ပြီး အမှတ်တူရရှိနေ ပါက အသက်အငယ်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ကိုသာ ဆုပေးရန်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၀) ပြိုင်ပွဲအဆင့် တစ်ခုစီအတွက် စာမေးပွဲကြာချိန်မှာ ၁နာရီ နှင့် မိနစ် ၃၀ ဖြစ်ပါသည်။
၂၁) ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားအား ပြိုင်ပွဲပြီးနောက် သီတင်း(၂)ပတ်အကြာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့အတွက်ဆုပေးပွဲအား ၂၂ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး အခြားမြို့များအတွက် ဆုပေးပွဲများ၏ အချိန်နှင့်နေရာအား နောင်တွင်ကြေငြာပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၂) အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ဇယားအတိုင်း အဆင့်(၁)ခုစီတွင် ဆုရရှိသူ (၅) ဦးစီရှိမည်ဖြစ်ပြီး ပထမဆုံး အယောက်(၂၀)စာရင်းဝင်သူများမှာ အထူးဆုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပထမဆု- ၅၀၀၀၀ ကျပ်
ပထမဆု- ၆၀၀၀၀ ကျပ်
ပထမဆု- ၈၀၀၀၀ ကျပ်
ဒုတိယဆု- ၄၀၀၀၀ ကျပ်
ဒုတိယဆု- ၅၀၀၀၀ ကျပ်
ဒုတိယဆု- ၇၀၀၀၀ ကျပ်
တတိယဆု- ၃၀၀၀၀ ကျပ်
တတိယဆု- ၄၀၀၀၀ ကျပ်
တတိယဆု- ၆၀၀၀၀ ကျပ်
စတုတ္ထဆု- ၂၀၀၀၀ ကျပ်
စတုတ္ထဆု- ၃၀၀၀၀ ကျပ်
စတုတ္ထဆု- ၄၅၀၀၀ ကျပ်
ပဉ္စမဆု- ၁၀၀၀၀ ကျပ်
ပဉ္စမဆု- ၂၀၀၀၀ ကျပ်
ပဉ္စမဆု- ၃၀၀၀၀ ကျပ်
၂၃) ပြိုင်ပွဲဝင်များအနေနှင့် ဆုရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်စေရန် အနည်းဆုံးမေးခွန်း (၁၂)ခု၊ မေးခွန်း၏ ၆၀% အားဖြေဆိုသင့်ပါသည်။
၂၄) အကယ်၍ပြိုင်ပွဲဝင်သည် မေးခွန်း၏ ၆၀% ပင်ပြည့်မီအောင် မဖြေဆိုနိုင်ပါက မိမိရရှိသည့်အမှတ် အလိုက်သာ အဆင့်သတ်မှတ်ပေးခြင်းခံရပါမည်။
၂၅) ဆုများအား ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည့်ဆုပေးပွဲတွင် ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၆) Horizon ကျောင်း၏သချာင်္ဌာနသည် အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာဖွယ်ရာ များနှင့် အခြားသောကျင့်ဝတ်များအား ချိုးဖောက်သည့်ပြိုင်ပွဲဝင်အား ပြိုင်ပွဲမှထုတ်ပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
၂၇) ကျောင်းနှင့်အနီးတ၀ိုက်တွင် မလိုလားအပ်သောယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု မဖြစ်ပေါ်စေရန် ကျောင်းဝင်း အတွင်းနှင့် ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကားပါကင်ထိုးခြင်း၊ ကားရပ်နားထားခြင်း မပြုလုပ်ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ ပါသည်။
၂၈) ပြိုင်ပွဲဝင်များအားလုံးသည် ပြိုင်ပွဲမ၀င်မီ အထက်ပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား သေချာဖတ်ရှု လိုက်နာ ရမည် ဖြစ်ပါသည်။	Application Form
download the application form	Mathemania 2012 Poster
SHU KHINN THAR CAMPUS | Po Sein Campus | Mandalay Campus | Kindergartens | Horizon Sports Academy
Copyright © 2010 • All rights ® reserved by HORIZON • Powered by VeriLoft